Zvepasi rose & National Mutero Kuronga | Law & More
Yepasi Pose & Yenyika Mutero Kuronga
Kuronga mutero ndiyo tsika yekubatana kwakakwana kwemari mubatanidzwa kuitira kuti irambe yakaderera mutero wakaderera sezvinobvira. Kunyangwe kazhinji ichionekwa seisingadiwe, kuronga mutero hakusi pamutemo. Kuronga mutero kunogona kuvapo nekuda kwekusiyana kwemitemo yenyika uye yepasi rose, misiyano muzvibvumirano zvemutero uye nekuda kwenzira iyi mitemo iyi inopaza kana kuwedzeredza.
The Law & More tsika yemitero inobata nenyaya dzeDutch nedzenyika dzese.
Mukubatana nevatiri vemitero isu tinopa zano remutero uye kuronga kune vakakwira michovha yakakosha vanhu uye mhuri dzavo, avo vari kana vari pasi pemutero wechiDutch. Nyanzvi dzedu dzakabatikana nenyaya dzemutero kune akasiyana bhizinesi remhuri reDutch nerekunze nemabasa epasi rese. Isu tinomirirawo vatengi vechiDutch nevepasi rose mumakakatanwa emutero epasi rese uye tinowanzoita mitero yekumisikidzwa kutarisana nevatungamiriri veDutch.
Law & More inobatsira zvakare kwakasiyana siyana kuronga dzimba uye kuronga mabhizinesi kuronga zvinhu kune vatengi vega uye mabhizinesi avo. Isu takanyanya kusarudzika mukugadzira uye kushandisa iyo yazvino matanho (yemutemo) nzira mukutonga-kwakawanda kuronga kuti tiite zvimiro zvinobudirira kune vatengi vedu kuti varambe vachiteerera mutero uye kuziva mutero unobudirira.